Rakaab Xanuun badan ayaa lagu qasbay inuu raaco diyaaradda United Airlines iyadoo ka duushay Frankfurt kuna sii jeeday Newark Booliska Federaalka Jarmalka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Rakaab Xanuun badan ayaa lagu qasbay inuu raaco diyaaradda United Airlines iyadoo ka duushay Frankfurt kuna sii jeeday Newark Booliska Federaalka Jarmalka
Guddiga Dalxiiska Afrika • Airlines • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Cameroon • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Dadka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Qaar ka mid ah safarka adduunka iyo dalxiiska adduunka ayaa ugu yeeraya Miss Cameroon. Francoise Kameni kaliya maahan Madaxweyne kuxigeenka Baseball iyo Softball Federation ee Cameroon iyo xubin katirsan Xiriirka Caalamiga ee Softball, laakiin sidoo kale waxay kamid tahay hogaamiyaasha ugu caansan Cameroon ee warshadaha dalxiiska Afrika. Francoise waa danjiraha Guddiga Dalxiiska Afrika oo uu ahaa eTurboNews Safiirka astaanta u ah Cameroon muddo 20 sano ah.
Sannado badan Francoise waxaa lagu arki jiray munaasabadaha warshadaha safarka adduunka oo dhan.
Waxay ka tagtay Cameroon horraantii Maarso iyada oo ku sii jeedday magaalada Berlin, Jarmalka si ay uga qayb gasho bandhigga ganacsiga ITB. Nasiib darrose, ITB ayaa loo baajiyey Coronavirus dartii maalintii ay ka tagtay Douala.
Francoise waxay joogtay 2 maalmood magaalada Berlin waxayna kusii socotay magaalada New York si ay uga caawiso safaarada Cameroon mashruuc. Waxaa loo ballansaday inay dib ugu duusho Cameroon bishii Maarso 19keedii Duulimaadkeedii waa la joojiyay sababo la xiriira COVID-19 waxayna ku xayirneyd New York in ka badan 2 toddobaad.
Dhageyso sheekada cajiibka ah ee Francoise ay u sheegeyso eTurboNews iyadoo lala yaaban yahay aagga transit-ka ee FRAPORT.
Safaaradda Cameroon waxay diyaarsatay duulimaad samatabbixin ah oo loogu talagalay muwaadiniinteeda min Paris ilaa Douala bishii Abriil 17. Francoise saacado ayey taleefan ku qaadanaysay maalin kasta inta ay joogto New York. Ugu dambeyntiina, Shirkadda Duulimaadyada ee United Airlines ayaa ku sii ballansatay iyada duulimaadka Lufthansa ee ka imanaya New York ilaa Paris iyada oo sii maraysa Frankfurt 4-tii Abriil.
Lufthansa waxay ka raacday New York markii Francoise ay soo bandhigtay fiiso badan oo lagu galo Schengen oo ay bixisay Safaaradda Faransiiska ee Douala.
Markii ay 9.30 subaxnimo ka degtay Frankfurt subaxnimadii Axadda oo ay dooneysay in loo wareejiyo duulimaadkeedii Lufthansa ee Paris Charles de Gaulle Airport, Booliiska Federaalka Jarmalka ayaa diiday soo galitaankeeda sababo la xiriira xaddidaadaha xadka Coronavirus.
Booliska Jarmalka waxay ka hubiyeen maamulka Faransiiska mana helin tilmaam cad, sidaa darteed waxay ku amreen Ms. Kameni inay ku qaadato 23 saacadood meel cidla ah oo transit ah ee garoonka diyaaradaha ee Frankfurt Internation Airport. Ma jirin wax cunto ah laakiin waxay ku guuleysatay inay hesho koob biyo ah 24-saac oo ay ku sugeysay garoonka diyaaradaha
Sarkaal ka tirsan booliska Federaalka Jarmalka ayaa sidaa u sheegay eTurboNews: “Aad baan uga xumahay gabadha, laakiin gacmahaygu way xidhan yihiin. Xuduudahayagu way xidhan yihiin, Lufthansana waxay ahayd inayna waligeed aqbalin inay ka raacdo New York Jimcaha. Duulimaadyada Lufthansa ayaa ah duulimaadyada hal dhinac oo keliya oo samatabbixin ah oo Jarmalku ku yimaado guriga. ”
eTurboNews soo gaadhay Lufthansa, laakiin wax jawaab ah oo ilaa hadda laga qabtay ma jirin.
Francoise waxay biloowday inay xanuun dareento inta ay jogtay FRAPORT waxayna codsatay inay dhakhtar aragto axada. Ma jirin dhakhtar la heli karo waxayna ku dhibtootay inay feejignaato.
Ugu dambeyn 10-kii subaxnimo ee Isniinta ayaa waxaa galbiyay Booliska Federaalka ee Jarmalka oo ay u raaceen diyaaradda United Airlines oo duulimaadkeedu ahaa 691 waxayna ka tagtay Frankfurt 11.20 am oo ku sii jeeday Newark, New Jersey.
Ma cadda haddii loo ogolaanayo Mareykanka magaalada Newark. Maaddaama aan la weydiin xaaladdeeda caafimaad markii ay ka dhoofaysay Mareykanka Jimcihii, lama weydiinin markii ay ka degtay Frankfurt, mar labaadna lama weydiin markii ay duulimaadkeeda ku tageysay Newark waa in la rajeeyo in Francoise aysan wadin COVID-19 .
eTurboNews waxay u yeertay United Airlines ka hor bixitaankeeda si ay ugu wargeliso shirkadda khatartan suurtagalka ah. Wakiilka ku sugan xarunta wicitaanka ee Chicago ayaa u sheegay eTN inaysan jirin wax ay sameyn karto.
Macluumaad ay Francoise siisay Booliska Federaalka Jarmalka garoonka diyaaradaha ee Frankfurt. Francoise waxaa lagu qasbay inuu saxeexo dukumintiga. Dukumentiga wuxuu ku qoran yahay Jarmal, laakiin rakaabku kuma hadlayo erey Jarmal ah.
Safaaradda Cameroon waxay xaqiijisay mas'uuliyiinta Jarmalka iyo Faransiiska ee ku saabsan duulimaadka samatabbixinta iyagoo ka codsaday inay ka aqbalaan inay u safarto Faransiiska, si ay u qabato duulimaadkaas
Hadda, Francoise ayaa saaran diyaaradda United Airlines oo ka duleysa Frankfurt kuna socota Newark, New Jersey si ay mar kale ugu xannibto Mareykanka.
Waxay awood u yeelatay inay u digto wasaaradda arrimaha dibedda ee Cameroon si ay uga caawiso maamulka Mareykanka.
Meelaha safarka ugu jaban ee laga dukaameysto Louis ...
Diyaaradda El Al Israel ayaa bilawday duulimaadyo toos ah oo ...
Flynas waxay ku dhawaaqday daahitaanka duulimaadyada tooska ah ee KSA ...